Andro iraisam-pirenena momba ny kreôla - 28 Oktobra
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Andro iraisam-pirenena momba ny kreôla - 28 Oktobra
Oktobra 28, 2018
Ny Alahady faha-28 Oktobra dia nankalaza ny tontolon'ny kreôla ny tontolon'ny kreôla. Avy amin'ny Nosy Indianina Vanilla Vanilla ka hatrany Karaiba ary hatrany New Orleans any Louisiana USA ary Cabo Verde dia mpirehareha rehetra izay manan-jo hankalaza ny mombamomba azy sy ny kolontsainy.
Ny fanontaniana iray amin'ity Andro Creole manan-tantara ity dia hoe "Avy aiza ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny kreôla?" Lahatsoratra iray navoakan'ny ARCHIPEL MEDIA tamin'ny 30 SEPTAMBRA 2017 28 Oktobra: ANDRO CREOLE INTERNATIONAL «BANNZIL KREYOL» dia milaza izany rehetra izany.
Tamin'ny taona 1979, nisy kaonferansa iraisam-pirenena momba ny famotopotorana ny teny kreôla nampivondrona ireo mpandinika ny fiteny manerana izao tontolo izao tao Seychelles Taorian'izay, tamin'ny 1981, ireo mpahay siansa manana ny tenin-drazany kreôla dia nanomboka nametraka fanontaniana momba ny fomba mety hampiroboroboana ny teny kreôla, taorian'ny horonam-peo natolotry ny Komity Iraisam-pirenena momba ny Fikarohana Creole, izay ny lohahevitry ny fandinihana dia: "Creole, creoles, Continuity and famoronana eo amin'ny tontolo kreôla. ”Tamin'ny 28 Oktobra 1981, tamin'ny fihaonambe fahatelo, tao amin'ny Old Port in Saint Lucia, nanapa-kevitra ireo mpikabary kreôla mba hiaraka hamorona hetsika izay naka ny anarana hoe: BANNZIL KREYOL. Ary tapaka ny hevitra fa hotanterahina ny 28 Oktobra satria io daty io dia notazonin'ny Dominikanina hankalazana ny "Fetin'ny Creole" iray. Tamin'ny 1982 dia nikarakara herinandro kreoley ny governemanta Seychelles, tamin'io taona io ihany ny hetsika BANNZIL KREYOL no nanoratra ny lahatsoratra nanorina azy tao anaty bulletin isam-bolana. Ny 28 Oktobra 1983 no andro voalohany an'ny BANNZIL KREYOL.
Ny "Andro Iraisam-pirenena ho an'ny kreôla iraisam-pirenena" dia nankalazaina tamin'ny 1983, tamin'ny fomba somary somary mavesatra. Na izany aza, isan-taona dia nihatsara ny fampiharana an'io andro io ary any amin'ny firenena sasany dia tranga misy hetsika lehibe sy mahaliana. Nanomboka tamin'izay, ny andro 28 Oktobra dia ankalazaina amin'ny firenena rehetra amin'ny tontolo kreôla. Firenena maro ankehitriny no mankalaza an'io andro io mandritra ny herinandro, manasongadina ny zava-nisongadina tamin'io andro io tamin'ny 28 Oktobra.
Seychelles dia eo afovoan'ny Festival Kreol 2018 ankehitriny, fankalazana iray izay mipetraka isan-taona amin'ny kalandrie nosy National Events. Ny sabotsy lasa teo dia nanao ny Laserenad (Festival Parade) tany Victoria izy, hetsika iray izay manohy ny fisongadinan'ny Fetibe.
Manaraka ny tetiandron'ny Fetiben'ny Creole dia ny an'i Maorisy, Rodrigues ary La Réunion
Sary avy amin'ny Laserenade any Victoria Seychelles
Nanokatra birao ara-toekarena any Seychelles i Reunion
M Sosialy Singapore: Chef an'ny lohan'ny biby sy lolo i Louis Tan
Kongo, vaovao momba ny dia momba ny dia
Ny valanaretina Ebola dia nitranga tany amin'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo
Dubai dia mandray ny hetsika fizahan-tany sy fizahan-tany voalohany any Moyen Orient hatramin'ny COVID
Nanjavona ny sarin'i Aostralia ho firenena tan-dalàna, fitoviana ary zon'olombelona
Nivoaka ny talen'ny NASA Johnson Space Center
Nanangana vondron'asa hiatrehana ny COVID-19 ireo mpandraharaha mpizahatany India